Kedu ihe mmụta gbasara mmadụ na-amụ? | Nhazi na ọmụmụ ihe
Maite Nicuesa | 30/12/2021 10:00 | Ọmụmụ
Kedu ihe mmụta gbasara mmadụ na-amụ? Enwere ngalaba ihe ọmụma dị iche iche ebe a na-egosi mmadụ dịka isiokwu na, kwa, dịka ihe. Anthropology bụ ihe atụ nke a. Ọzụzụ nke na-enye ozi na-akwalite nghọta na ihe ọmụma nke onye ahụ, ọdịdị ha na ntinye ha n'ime ọha mmadụ. Ịdị adị nke mmadụ nwere ike imesi ihe dị iche iche ike dị ka omenala, mmekọrịta mmadụ na ibe ya, omenala ma ọ bụ nkà. Eziokwu nke mmadụ na-enweta echiche dị iche iche site na echiche omenala ọha mmadụ.
A na-ahazi akụkọ ndụ onwe onye nke mmadụ pụrụ iche na nke a na-apụghị ikwugharị gharịgharị na gburugburu ebe ụkpụrụ, ụkpụrụ na omenala dị. Ọnọdụ ndị gbara ya gburugburu anaghị ekpebi nnwere onwe ime nke isiokwu ahụ. Ma ha bụ akụkụ nke akụkọ ndụ ya. Ọmụmụ ihe gbasara mmadụ nwere njikọ chiri anya na nkà ihe ọmụma. Ikike nke ihe ịtụnanya na mmụta bụ isi ihe na-ahụ maka eziokwu site na nkwanye ugwu gaa n'ụdị dị iche iche. Ihe a na-ahụta dị ka kwa ụbọchị site na mbara igwe adịghị akọwa n'ụwa niile eziokwu nke ụmụ mmadụ na ọnọdụ ha.
1 Nyocha nke mmadụ, ọha mmadụ na omenala
2 Mkpa nkà mmụta ihe gbasara mmadụ na ọha mmadụ taa
Nyocha nke mmadụ, ọha mmadụ na omenala
Nghọta nke omume na ụzọ omume nke mmadụ nwere ike ọ bụghị nanị iji nnwere onwe onwe onye kpọrọ ihe, kamakwa na-ezo aka na ọnọdụ. N'ihi ihe ndị a nile, nkà mmụta ihe gbasara mmadụ ọ bụghị nanị na-eme ka ìhè dị n'isi nke mmadụ n'otu n'otu. Ma Nchọpụta ahụ na-enyekwa azịza gbasara otu dị iche iche na-elekọta mmadụ na njirimara ha.
Enwere nuances dị iche iche na-enweta ihe ha pụtara n'ihe gbasara otu ma ọ bụ omenala. Dịka ọmụmaatụ, emume na akara. Mmekọrịta na gburugburu ebe obibi na-akwalite ahụmịhe, mmụta na imekọ ihe n'echiche. A na-ebufekwa okwu omenala site n'ọgbọ ruo n'ọgbọ dị ka e gosiri site n'ọrụ ọdịnala ma ọ bụ nkwado ezinụlọ.
Site na mmekọrịta mmadụ na ibe ya, ọ ga-ekwe omume ịhụ mgbanwe nke mmadụ n'akụkọ ihe mere eme niile. N'ụzọ dị otú a, nchọpụta ahụ na-emesikwa ike ịmata ọdịiche dị iche iche na akụkụ ndị a na-echekwa na ọnọdụ dị iche iche. Omenala metụtarakwa ibi ndụ, nkwenkwe, ụkpụrụ, ụdị mmekọrịta mmadụ na nkwurịta okwu.
Mkpa nkà mmụta ihe gbasara mmadụ na ọha mmadụ taa
Mgbanwe mmekọrịta mmadụ na ibe ya na-emetụtakwa mmadụ. Ihe pụtara ìhè na ọnọdụ nke ọrịa na-efe efe nke mere ka ịmụta àgwà ọhụrụ nke etinyere n'ụzọ zuru oke na ndụ. Ma, n'aka nke ọzọ, usoro nke ime mgbanwe na mgbanwe ahapụkwala usoro a na-eme nke ọma. Ụdị mmekọrịta ọha na eze na ụzọ isi ghọta nzute na ndị ọzọ agbanweela. Ya mere, Anthropology bụ ọzụzụ na-arụ nnukwu ọrụ taa.
N'aka nke ọzọ, eziokwu nke mmadụ abụghị nanị na a na-emepụta ya na mpụga, ma a na-ejikọta ya na ụbara nke ụwa dị n'ime. Echiche, mmetụta uche, mmetụta na echiche bụ akụkụ nke ọdịdị mmadụ. Ihe niile a kpọtụrụ aha na-emetụta ndụ kwa ụbọchị na ime mkpebi.
Onye ọ bụla nwere ihe dị mkpa n'otu n'otu n'ihi na ọ bụ ihe pụrụ iche na enweghị ike ikwugharị ya. Ma, n'aka nke ya, ọ na-ekekọrịta àgwà na otu nke ọ bụ akụkụ ya na ndị ọzọ. Nke anthropological nghọta ọdịdị mmadụ na-enye ozi nke na-eme ka ihe ọmụma onwe onye na ntinye anya.
Ya mere, obodo dị iche iche na-ekpughe ụdị dị iche iche dị. Ọ ga-amasị gị ịbụ ọkà mmụta gbasara mmadụ? Ọ bụ otu n'ime ọrụ ndị dị oke mkpa taa.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Nhazi na ọmụmụ ihe » Ọmụmụ » Kedu ihe mmụta gbasara mmadụ na-amụ?
Kedu ihe eserese eserese na-amụ?